kinozarisovki Bright ezicacile ngezimo intsha kokuya impelasonto eziyingozi, futhi phakathi naleso sikhathi uqala kwenzeke zonke uhlobo esihogweni, qinani udumo lwawo nokuhlobana. Ngakho-ke, ngale ndaba asiyeki vule izingqondo okudala abenzi mafilimu nekhulu leminyaka edlule nengxenye, isibonelo obugculisayo - movie "The Blair Witch Project" (1999) kanye kumdlalo walo "I Blair Witch Project" (2016).
Ebhokisini yasekhaya ehhovisi ultramalobyudzhetnye ($ 22,000) kanye superprofitable ($ 248,639,099) "I Blair Witch Project" safike ingashintshwa horror isihloko ne isihlokwana "Project, I." Mhlawumbe abasabalalisi yasekhaya nje ungathandi igama elithi "project". Umdwebo yokuqala yayibizwa ngokuthi "Wephrojekthi Blair Witch Project."
Ngemva nje kokukhululwa kwe-ugingqe itheyiphu ngesikhathi IMDb simo ongaphakeme: 6,40 isimo lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa yazuza futhi iye kufakwe ohlwini horror yimpumelelo kakhulu, iwine unendawo ehloniphekile lesithupha phakathi "Alien" futhi "Ingane Rosemary". Leli qiniso ebangele okuxubile ukuphendula kinoobschestvennosti ngokuthi "The Blair Witch Project" lithole Izibuyekezo okuxubile. baxgeki Aggressive abanomqondo ofanayo uma ebonakala umsebenzi abaqondisi abasha abalobi Eduardo Sanchez noDaniyeli Myrick ke hhayi kuphela cishe esabekayo, kodwa ngezinye izikhathi ngokungagwegwesi isidina isithombe.
Le filimu "I Blair Witch Project" has a ngesakhiwo elula, owawuthi ekuqaleni Okthoba 1994 zintathu umfundi abenzi mafilimu Hezer Donahyu, uJoshuwa ULeonard Michael C. Williams elithunyelwe esinindolweni emahlathini of Maryland, ukudubula ifilimu documentary - umsebenzi Yiqiniso ku yetinsita wendawo. Le nganekwane waphefumulela abathakathi we indaba yokuphila ka-Blair. Kusukela ngaleso sikhathi, izingane ayisabhekwa kuphela amafilimu adutshulwe kubo atholakele ngemva konyaka ukuthi, eqinisweni, inikeza ukunakekelwa sesibukeli, owafika umbukiso eshaqisayo, "I Blair Witch Project."
Izibuyekezo ukugqamisa indikimba yendaba akunqunywa okuqukethwe, hhayi okufanela bokubeka akenzi umdlalo, futhi indlela yokudlulisela okungalungile. Ngu definition, cinema ochwepheshe kusukela isithombe is hhayi zikhunjulwe asinazo izithombe ezibukwayo nemizwelo eyodwa nakho ngifuna unganakile ukuzibeka izicathulo abalingiswa. Yingakho horror "I Blair Witch Project" (idethi 25 Januwari, 1999) ukhulelwe negalelo elinamandla izethameli.
Esimeni semakhaya umkhankaso yokukhangisa bonke abadlali abathintekayo emsebenzini wokukhiqiza ifilimu ku IMDB.com, zaziphawuleka ngokuthi "ulahlekile, bashone." By endleleni, le eqenjini lomculo yabalingisi ifilimu "I Blair Witch Project" lithole izimpendulo nozwela yabaphenduli. Kuyinto umthwalo osindayo kakhulu kubangelwa iphrojekthi Abadali zabo emahlombe, kude kokuba esengene kinoizyskah yabo.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile nabadlali kwakufanele opharetha, babefanele enta taba njalo. Izikhathi eziningana emini labaqondisi sokudubula eqoshiwe "izifiso" yabo ku amashidi ephepheni elihlukile, phinda kubo ngobunono lanikwa umlingisi ngamunye esandleni ukuze abanye babengazi ukuthi kulotshiwe kusukela osebenza nabo. Ngakho abalobi bakwazi sifinyelele nomphumela ekhexisayo ukudideka nangokudideka phakathi izinhlamvu eshaqisayo, "I Blair Witch Project."
Izibuyekezo izindlela ezinjalo okudala zokusebenza ziyangqubuzana kakhulu. Abanye abalobi, Abanikeli, ongazazisi abaqondisi emisha, abadlali osolwa ekuguqulweni izinhlamvu zabo ejwayelekile iqhawe movie isigaba B, okuyinto kuphela egijima ezungeza, ukuthetha kakhulu, falling, ngokuvamile, ngazo zonke izindlela ongazicabanga ukuya uyahlanya. Ikakhulukazi observation umxhwele iqiniso ukuthi kule simo sokwesaba nokuphelelwa ithemba izinhlamvu ngokuhlakanipha uqhubeke ukudubula, akazange afune ukuqeda imishini.
Nakuba abalobi isaziso ukufa kwabo okudabukisayo futhi zife umlingisi itheyiphu ebizwa amagama efanayo amaqhawe abo ke ngenkuthalo kumafilimu eziningi.
Hezer Donahyu, aluthola udumo emhlabeni wonke ngemva iqhaza "witch" futhi kamuva inkanyezi emisebenzini ye "Ukulinganiselwa engaphandle", "Stolen", "Morgue." Okusanda, umculi sibonwe phakathi yabalingisi Ensemble yochungechunge "Kuyinto Njalo Sunny ePhiladelphia."
UJoshuwa Leonard ngaphambi kokuba yingxenye horror Myrick futhi Sanchez wakwazi ukuthatha ingxenye in ukwenziwa imidwebo I ilensi ka Ukungaphili engqondweni, bese kuya ku 2005, ngenkuthalo isinyathelo. It filmogarfii avele elandelayo opholile: "Madoda akwa-Ukuhlonipha," "Live kusuka eBaghdad", "okubi kakhulu akwenzeki", "Indlu Ukwesaba", "iqoqo", "Axe" futhi "Iziqu ZaseGileyadi". Ngokulandelayo, uLeonard banquma ukuzama masinyane endle aqondisa futhi waqondisa film Youth Kithi, kodwa namanje wabuyela incarnation umlingisi futhi waba nendima eyinhloko esithombeni sebhayisikobho ekhuluma "Futhi uhleko, nesono" (2009)
Michael C. Williams wayengeyena aseqala ifilimu "I Blair Witch Project." Umlingisi-osebenza nabo waphawula bomsebenzi wakhe. Ngenxa umculi ifilimu "I Inhloso," "Njengabafokazi Nezakhamuzi," "Ngaphandle Trace," "Ngamafuphi," "uSally" nabanye. Ngemva kokuphela adubule "abathakathi" yenqubo, wabuyela ochungechungeni "Law and Order", ezashiya ngesikhathi ukukhiqizwa.
"Blair Witch Project" (2016)
Fashion for psevdokumentalistiku uhlobo horror, ngokuyinhloko kuchazwa abalobi "Witch" ngo-1999, esikhathini sethu nakanjani oza engelutho. amasu Directorial ngokuthi wathola amavidyo, uveze amaqiniso njengoba enjalo ukhathele ekubukeni akubonakali yokuqala ukuze, kwenza ukuthi umuntu empeleni ngifuna senzo. Nokho, isiguli uyaphila ezingaphezu kuka efile, futhi ngemva kweminyaka engu-15 e-Franchise namanje igama elisha liye wathi - ". Isahluko entsha" kwakukhona "I Blair Witch Project" ngo-2016 ne isihlokwana
Ngokusemthethweni, i- "Witch" esisha inxenye yesithathu, nakuba abanye begxeka lo nines yesibili ngalesi sikhathi ambalwa nje khumbula kinogurmany, ukuze ifilimu ka 2016 ngokuya itulo - it is a ozimele ukuthi akudingi ukuba ube unolwazi ezengeziwe tape kuqala. Ngesikhathi esifanayo bhá horrormeyker abasha isikhathi wethu u-Adamu Wingard ( "Wena usuqedile!", "Guest", "V / H / S"), okubonisa lokusungula enviable, isibindi namasu, uphathe ukuze ufake isithombe eziningi izinkomba original horror, kodwa mncane kakhulu, hhayi obala. Kodwa, naphezu ukunemba emsebenzini nobuchwepheshe bale abadali "I Blair Witch Project: A New Chapter" Uthole isilinganiso eliphansi IMDb: 5.40 futhi eziningi ukugxekwa ku ingxenye ochwepheshe kanye izakhamuzi.
Ngokusho ezibambe semantic we horror entsha ke kuliragelo ngqo imidwebo sokuqala.
Ngo-2015, Dzheyms Donahyu (Dzheyms Allen McCune), ngifuna ku Youtube imiqophi yabathakathi eqhugwaneni, uthi kwelinye ozimele kwesibuko nge obonakalisa udade elingekho. Guy iminyaka eminingi ngifuna phi clue agibele umzila udade olahlekile ehlathini (umlingiswa oyinhloko webhayisikobho sithombe sokuqala). James abese enquma ukuya funa bakhe, kuhambisana umngane, filmmaker umfundi Lisa (Calista Hernandez), futhi umngane Peter (Brandon Scott) nentombi yakhe (Corbin Reid). Kakade ngesikhathi efika lapho uya khona ngokushesha kwabo agcwaliswa nge abahlanganyeli ezimbili - ochwepheshe ezinganekwaneni wendawo (Wes Robinson, Velori Kerri) esebenza njenge iziqondiso.
Phakathi izinzuzo tape "I Blair Witch Project: A New Chapter" a baxgeki owabizwa ngokuthi ukulingiswa umlingisi sika. Zonke neziphiwo abasha owaba nengxenye ekukhiqizeni iphrojekthi, kukhona izilaleli engajwayelekile. kuphela Velori Kerri, owenza indima yesibili ku vampire "Twilight" kuye kwenzeka ezidumile. Ngakho-ke, ngesikhathi ebuka umbukeli kungekho uhlelo kanye nemigqondo associative ukuthi ukusebenzisa emahlathini ezinye izinhlamvu izithombe. Kulokhu, zonke abadlali bantule efaneleyo, beziphatha ngendlela efanele futhi engeqisi izigcawu nsuku zonke, futhi lapho sibhekene nezikhathi ezinzima. Ngakho-ke, abalingiswa kule ifilimu kubangele likubone, uma kungekhona uzwela, uzwela ngokucacile.
Abalobi "Abathakathi" omusha azi ukuthi angaluthola kanjani izilaleli okumelwe nimesabe: namaqhawe eyeve eshumini nambili liye laphindeka kabili, futhi ukukhalela kwabo kuzwakele kabili kuqine. Kubo bonke, ifilimu entsha kakhulu wenabisa izinganekwane abathakathi eliyingozi, ngifuna ulwazi olusha khona isiphetho kuletha umbukeli ngemibuzo ezingaphezu kuka izimpendulo. Mhlawumbe abalobi ushiye ithuba lokuba Quadrilogy trilogy? Kuyocaca ekuhambeni kwesikhathi.
"Violet" TV: nabalingisi ngesakhiwo
Connoisseur of nemiphefumulo yabantu - yilokho i-Mentalist!
Igor Zolotovitskii. Biography of umlingisi
Iwayini non-utshwala njengekhambi lokwelapha izifo eziningi
Monkey isinkwa: iresiphi ngezithombe. Indlela ukupheka multivarka inkawu isinkwa?
Bugs ku iqolo - iphupho abesabekayo zonke wekhaya